Obi kwesịrị igosipụta Jesus | Apg29
Obi kwesịrị igosipụta Jesus
The ụwa kwesịrị Kraịst bụ ndị obi na-ere ọkụ na a mirror na-egosipụta Jesus Christ.
Mgbe m bụ n'ụlọ, m na-ahụ onwe m na mirror na-ekwu, sị, "Ọ bụghị m hụrụ gị n'ihu?". E mgbe ahụ ebube n'anya, ị maara, jupụta na-arịa ọrịa dị ka m bụ. Taa bụ mirror image abụghị otu, ugbu a ị na-eche obi ụtọ ọ bụ nke Jizọs Kraịst na ụmụ ya, ọbụna na ya flaws na-anaghị emezi emezi.
Ị hụrụ onwe gị n'enyo nke izu?
Ịkekọrịta bụ Christian okike. Onye hụrụ chọrọ inye ihe o nwere. M na-aga na-arịọ gị ma ọ bụrụ na ị hụrụ onwe gị n'enyo nke izu? Ikekwe ị na-eche echiche oh oh ya mere agadi m ghọọ, Nämen ọtụtụ wrinkles m natara n'ihi Andy si mail, ma ọ bụ i nwere ike na-achọpụta, oh oh m ga-esi prettier ụbọchị ọ bụla Chineke hụrụ m n'anya!
Anyị echiche bụ na-akpali nri? N'ihi na ọ fọrọ nke nta ka afọ 15 gara aga m nwere a nlọghachi azụ, na-aṅụ mmanya na ghọrọ nerbrottad anọ nche na abụọ cops onye jụrụ ya otú ị? Ọfọn ọ bụghị otú ahụ ihe ọma na Andy onye nwere, dị ka dọkịta na ndị na-arụ ọrụ fọrọ nke nta ka 4 kwa puku na ahụ, ya bụ, ihe ize ndụ nke na-egbu egbu na-aba n'anya na nsi, a nile na Christmas Day!
M riri ọtụtụ rödbetsallad na ham na Morgan, enyi m, bụ onye ya na mmanya na-egbu. Anyị gara otu ebe hey na n'ebe ahụ ka m blacked si na-adịghị echeta ihe m mere, ihe nile nke a na mberede m anọ na nche na abụọ uwe ojii onye mgba m ala n'ala.
Na nke ukwuu mmanya na ahu, ya mere ha zitere m ka m jupụta cell nke m mwute ikwu na spyde ala na beetroot salad. M mere ihere mgbe ha ga-ezitere m n'ụlọ, nerspydd na belt n'olu m, na enweghị sọks, m na-ahapụ ndị uwe ojii. Ọ bụ dịkarịa ala, 20 degrees.
Mgbe m bụ n'ụlọ, m na-ahụ onwe m na mirror na-ekwu, sị, "Ọ bụghị m hụrụ gị n'ihu?". E mgbe ahụ ebube n'anya, ị maara, jupụta na-arịa ọrịa dị ka m bụ.
Taa bụ mirror image abụghị otu, ugbu a ị na-eche obi ụtọ ọ bụ nke Jizọs Kraịst na ụmụ ya, ọbụna na ya flaws na-anaghị emezi emezi.
Burning obi nke ahụ bụ mirror oyiyi nke Jizọs
Anyị mkpa karịa nke ịhụnanya Chineke ndị anyị! Chee echiche otú ihe okwu anyị nwere, ma anyị ga agbata obi anyị n'anya? World emee ka anya doo anya nchegbu na ọ ga-ọbụna njọ karịa ihe anyị na-ahụ ugbu a. The ụwa kwesịrị Kraịst bụ ndị obi na-ere ọkụ na a mirror na-egosipụta Jesus Christ.
Ugbu a, m nwere ike ịhụ onwe m na mirror
The mirror image, m nwere na-anya mgbe m na-akpọ rijuru afọ gburugburu na Morgan bụ adịghị atọ ụtọ, m na o wutere ya mgbe e mechara. Ugbu a, m nwere ike ịhụ onwe m na mirror na n'ebe ahụ ka m na-ahụ a mara mma gbapụtara zọpụta agadi nwoke nke afọ 51. Ee, m na-adịghị amasị ndị ọzọ nile, ọ nwere zaa chọpụtara niile m mail? Ma ihe ọ bụla na ọ bụ gị na m hụrụ n'anya nke ukwuu site Jesus Christ.